Okpokoro okporo ụzọ mebiri emebi n'isi ụlọ ọrụ Isi obodo | RayHaber | raillynews
HomeỤzọ Awara AwaraAkụkọ AsphaltEjiri Iju Mmiri Gburuo Azụ Azụ Azụ Azụ
30 / 03 / 2015 Akụkọ Asphalt, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ
Okporo ụzọ Asphalt dara n'ala n'isi ụlọ Mmiri mmiri ozuzo na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ ala Ivedik dị na Ankara dara n'ihi oké mmiri ozuzo, mgbe ọ kwusasịkwara nnukwu ikpo mmiri, ụlọ mmiri na ụlọ ndị gbara ya gburugburu juru.
Okporo ụzọ mgbochi nke dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko Ivedik na district Yenimahalle nke Ankara daa n'okpuru nduzi mmiri ozuzo. Mgbe ọdịda ahụ gasịrị, n'ihi nbibi nke isi mmiri, mmiri mmiri hapụrụ ụlọ ndị gbara ya gburugburu na ubi dị iche iche.
AKWỤKWỌ NKE AKWỤKWỌ, ỌTỤTỤ OWU
Ihe omume ahụ mere na Cem Ersever Street dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko Ivedik na mpaghara Yenimahalle ná mgbede. Otu akụkụ nke ụzọ ahụ dabara kpamkpam n'ihi oké mmiri ozuzo n'ụbọchị. Ọdịda ahụ kpatara nnukwu olulu n'okporo ụzọ.
ỌTỤTỤ ỤLỌ NA NWA NA-EKWU NDỊ ỌRỤ
Mgbe ngwakọta ahụ dara, e mebiri ụzọ kachasị mma. Mmiri mmiri na-esi ísì ụtọ, ụzọ kachasị nke na-ekewa ụlọ ahụ, kpatara mgbidi nke mgbidi ahụ. Mmiri nke si ebe a na-asọpụta ala ala nke ụlọ ndị gbara ya gburugburu na ubi n'okpuru mmiri.
NDỊ ỌTỤTỤ NA-ECHI EKWERE
N'ebe ụfọdụ ụlọ, ụmụ amaala gbalịrị ịsacha ndị ahụ. A hụrụ ụgbọ ala ụfọdụ. Mgbe okuku ahụ rutere, e mechiri n'okporo ámá ahụ ụzọ abụọ. Ndị isi obodo ndị e zigara n'ógbè ahụ malitere ọrụ.
108 jupụtara n'ụgbọ ala New York kwa afọ
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri a na-akpọ Ụgbọ mmiri, Oké ego a kwụsịrị
Ụgbọ mmiri Osaka na mmiri mmiri na Japan
Marmaray idei mmiri Darıca!
Agụmakwụkwọ College Ankaray 2 kpuchiri mmiri ruo ọtụtụ ụbọchị
Ụzọ Awara Awara na-ahapụ Ala Ọhịa n'Ala Mmiri
Okpokoro okporo ụzọ mechiri mgbe mmiri zochara
E mechiri ọdọ mmiri dị na isi obodo ka okporo ụzọ maka ụzọ
Ejiri okporo ụzọ na-arụ ọrụ dị elu
Egwurugwu osisi jupụtara na Zonguldak
Burdur Mayor Ejiri Asphalt na Ndị Ọrụ
Ebe a na-akpọ Ivedik metro
Okporo okporo ụzọ Asphalt
Nkume dara n'elu okporo ụzọ na Elazığ
Mara ọkwa curezụ ahịa: A ga-ebu ọrụ nhicha (Eskişehir Training Center Directorate…
Nkwupụta Obi: Tecer-Kangal Variant Technical Buildings
Ankaray kwụsịrị mgbe e mebiri mmiri
Buildlọ ndị na-emetụta Ọdọ okporo ụzọ na Bursa na-agbakọ